Isbarbardhiga warshadaha qalabka gudaha iyo shisheeyaha
Qalabka ajaanibta wuxuu muhiimad weyn siinayaa faa'iidooyinka qiimaha shirkadaha. Dhiggooda gudaha waxay ku tiirsan yihiin kab iyo dakhli. Macaamiisha bartilmaameedka ah ee qalabka gudaha iyo dibaddaba waxay kuxiran yihiin goor hore, warshado gaar ah, iyo shirkado leh rajo ganacsi. Waxaa ka go'an inay ...
Xaaladda Suuqa Warshadaha Qalabka
DHAQANKA SUUQA Waqtigan xaadirka ah, marka la eego qaabka ganacsiga ee warshadaha qalabka Shiinaha, qayb ka mid ah waxay soo bandhigaysaa muuqaalka "aaladda ganacsiga e-commerce", iyadoo la adeegsanayo internetka oo lagu kabayo kanaalka suuqgeynta; iyada oo la siinayo alaab qiimo jaban, waxay caqli ahaan u xallin kartaa indus gacmeedka ...